Fundamentos De SEO Do Semalt Or Como Melhorar Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ dịghị SERP
Mgbe azụmahịa nke obodo na-enweta usoro ntanetịahịa e-commerce, ọ na-abụkarị nnukwu mkpa iji dọta ndị ahịa n'ime obodo ahụ. Azụmahịa na-aga nke ọma nwere ma ọ bụ ntanetị n'ịntanetị na nke offline, nke na-eweta ọtụtụ atụmatụ na usoro. N'ihi mbipụta a, ahịa ịntanetị site na iji Nyocha Ịchọ Nchọpụta dị mfe (SEO) na-enyere aka n'ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ na SERPs, na-eme ka usoro ahụ dum baara ụlọ ọrụ ahụ uru. Otú ọ dị, usoro ahịa ahịa n'ịntanetị dị nnọọ egwu. Ndị ọrụ kwesịrị ịkpachara anya maka ọdịdị dị nro nke ịzụ ahịa ahịa dijitalụ. Dịka ọmụmaatụ, otu usoro nwere ike ịrụ ọrụ ugbu a kama jidere ọrụ ọzọ.
Igor Gamanenko, Semalt Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa, akọwapụtala ọtụtụ ụzọ ọchụchọ engines na-eji mee ihe n'usoro weebụsaịtị:
SEO mpaghara bụ ụfọdụ ahịa dijitalụ bụ ebe njedebe nke ezubere iche bụ mpaghara na mpaghara ebe. Ka ị na-ebuli saịtị gị iji gosipụta ọtụtụ ọdịnaya dị n'ịntanetị, ọ dị mma ilekọta eziokwu ahụ bụ na ebe nrụọrụ weebụ kwesịrị ekwesị gụnyere isiokwu kwesịrị ekwesị na aha, nkọwa nkọwa na ahụ nke ọdịnaya ahụ.
Google Maps bụ ngwaọrụ ọzọ dị mkpa iji chebe SEO. Map Google nwere uru ọ bara na ọ na-enyere mkpokọta weebụ gị aka. SEO a na-elekwasị anya na-agụnye gụnyere ọnọdụ dị mkpa na mpaghara na omume igwe mmadụ dị na ya mgbe ị na-agba saịtị ahụ Nnyocha nchọpụta dị mkpa. Ndị a bụ isiokwu ndị na-ebugharị okporo ụzọ niile na ibe weebụ gị..
Akpaka na mpaghara SEO:
SEO atụmatụ amalitela ịghọ akpaaka kemgbe mmalite nke SEO. E nwere ụdị ntanetị dị iche iche nke nwere ihe ndị nwere ike imepụta SEO. Site na akụrụngwa, enwere ike ịchekwa data ahịa na nchekwa dịka yana ịjikọta ọwa ahịa na ọtụtụ usoro nyocha data.
Ụlọ ọrụ ọ bụla nke chọrọ ịga n'ihu na ahịa ịntanetị ga-ebuli ebe nrụọrụ weebụ ha maka ekwe ntị. Na January afọ a, Google kwupụtara na nzaghachi nke saịtị na ngwaọrụ mkpanaka bụ otu n'ime ihe ha ga-eji na-ebuli weebụsaịtị. N'ihi ya, ịchọta ọdịnaya weebụ gị maka ịchọgharị ekwentị nwere ike ịghọ ihe bara uru. Na SEO mpaghara, ekwe ntị nwere ike iru ọtụtụ ndị na-eji nyiwe dịka mgbasa ozi ọha na eze.
Google ibe m ahịa na-enyere aka ahia ndi ozo n'umu ebe ntanetiti di. N'iji akaụntụ a, otu nwere ike iji ihe oyiyi dị elu iji kwalite ọdịnaya na saịtị ha. Ụlọ ọrụ ahụ na-egosi na google maps, na-amụba ohere nke ịbụ n'etiti nsonaazụ kachasị.
Ọ bụla azụmahịa ịntanetị chọrọ ntanetị na ntanetị engines nakwa dị ka n'elu ikpo okwu dị ka mgbasa ozi mgbasa ozi. Ahịa ahịa ahịa na-elekwasị anya na ndị ahịa nke ụwa site na usoro ndị a n'ihi nnukwu ahịa dị na ntanetị maka ọtụtụ ihe omume. SEO mpaghara gụnyere itinye ọdịnaya weebụ dị iche iche na mgbasa ozi ezubere iche na ahịa ahịa ndị ọzọ. Mgbe ọ na-abịakwute SEO dị iche iche, e nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche nke onye ọ bụla nwere ike isi na-eme ma nweta ọtụtụ uru n'aka ha. Mgbasa ozi SEO mpaghara gị ga-aga nke ọma ma ọ bụrụ na ị jiri ndụmọdụ ndị a dị na ndụmọdụ Source .